Ugwu igwe dị elu | Netwọk Mgbasa Ozi
Ugwu ugwu dị elu
El elu ugwu ihu igwe Ihe ejiri mara ya bu inwe otutu oyi n'uju nke nwere ogologo oge, n'oge a na-edekọ okpomoku nke na-etinye onye ọ bụla chọrọ ịrịgo ma ọ bụ ibi n'ime ya ule ahụ. Oge okpomọkụ dịkwa jụụ ma dị mkpụmkpụ, yabụ enweghị oge na-ekpo ọkụ n'ezie, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị dị ka ndị anyị bi na ala dị ala maara ya.
Ma olee ihe e ji mara ihu igwe a? Nye ma ọ bụ onye nwere ike ịnọnyere ọnọdụ ndị a? Anyị ga-ekwu maka nke a na ndị ọzọ n'okpuru.
1 Njirimara nke ihu igwe ugwu di elu
2 Onye bi n’elu ugwu di elu?
Njirimara nke ihu igwe ugwu di elu
Ugwu ugwu dị elu na-egosi na elu karịa 1200m. Ọ nwere oscillation na-ekpo ọkụ, ya bụ, ọdịiche dị n'etiti nke kachasị na nke kachasị pere mpe, nke 10,5ºC. Ọnọdụ ihu igwe ya dị nnọọ iche na ihu igwe nke mpaghara ahụ, n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọnọdụ okpomọkụ na-adaba na elu. N'ihi nke a, thermal gradient adịghị mma, site na 0,5ºC ruo 1ºC kwa mita 100 ọ bụla. Nke a pụtara na ọ kachasị na mkpọda ikuku, ya bụ, na otu ebe ikuku na-akachasị emetụ, ma iru mmiri na mmiri ozuzo na-amịpụta site na ịrị elu nke kọlụm ikuku mgbe ị na-ezute ugwu ahụ, nke a maara dị ka mmiri ozuzo. Na mkpọda ugwu ahụ ha nwekwara ike ịbawanye, mana ọ bụghị nke ukwuu, ebe ikuku na-adịkarị nke nkụ mgbe ọ na-agbadata na nrụgide nke ikuku na-abawanye. Maka ebumnuche a a na-akpọ ya Foëhn Wind ma ọ bụ Föehn Effect, na Spain anyị nwere ike ịchọta ya na mpaghara Iberian Peninsula, ọkachasị na Pyrenees, Central System na Baltic Mountain Ranges.
Na mgbakwunye, a ga-agbakwunye na n'ugwu ndị dị elu, insolation dị ukwuu karịa na ndị dị ala. Ma, n'agbanyeghị na enwere usoro ikuku ikuku, oke ikuku na ihu ihu na-emetụta ihu igwe nke mpaghara ahụ, na-emetụtakwa ha. Mmiri ozuzo ebe a ha dị nnọọ ụkọ n'ụdị mmiri ozuzo n'oge opupu ihe ubi na ọkọchị, na n'ụdị snow n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri.
Onye bi n’elu ugwu di elu?
N’agbanyeghi na odi ka ihe anaghi ekwenye ekwenye, enwere otutu anumanu na osisi ndi bi n’elu ugwu.
Nkewa osisi na nkewa n'ime ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ihu igwe a na-akpọbu tupu, ma ọ bụ na ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri na ugwu dị iche iche ma ọ bụ "ala" na-eme ka onye ọ bụla n'ime ha hụ otu ụdị ahịhịa nke jupụtara na mkpọda ugwu. Mana nke a apụtaghị na ha bụ "ala" nọọrọ onwe ha, ebe ha na-egbochi ndị ọzọ n'ezie.
E nwere ụdị cliseries abụọ:
Altitude: nke bụ n'ihi ọdịiche dị na okpomọkụ metụtara elu.
Latudinal: nke bụ n'ihi ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ metụtara ogologo nke akara ahụ sitere na ikuku.
Iji kewaa osisi nke ugwu a na-eji allisudinal cliserie eme ihe, nke nwere ike ịkọwapụta mpaghara 5 ma ọ bụ ala:
Nchikota: na mpaghara kachasị elu, anyị ga-ahụ obere osisi, nke a na-edobe nso na ala mgbe niile, dị ka lichen na moss. N’ebe dị milder, ahịhịa nwere ike itolite, na-akpụ ahịhịa.
Ihe na-esochi: enwere otutu conifers ndi emeela ka ha bi na oke ugwu di elu, ebe okpomoku di na efu. Na Spain anyị na-ahụ, dịka ọmụmaatụ, osisi Spanish na oji ojii.
Sikrob: na-agbadata ntakịrị, anyị nwere junipers na junipers, nke bụ conifers chọrọ obere okpomọkụ dị elu.
Akwụkwọ: N’akụkụ ugwu a anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ osisi na-amị mkpụrụ, dịka beech, akpu ma ọ bụ chestnut, kamakwa ụfọdụ ahịhịa ndụ, dị ka holm oaks, nke a na-emegharị ka ọ biri ebe mmiri anaghị ezo. Anyị nwekwara ike ịhụ osisi fir, mana naanị ebe ọ ga-efu.
Osisi chọrọ okpomọkụ dị elu: na mpaghara ala ugwu ahụ, osisi ochi kpọrọ ahịhịa, osisi carob, pine Aleppo, nnukwu oaks holm na-eto.
Ọ bụrụ na enwere osisi, enwekwara anụmanụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọtụtụ n'ezie. Ma ha niile bụ ndị lanarịrịnụ lanarịrị, ndị jisiri ike imeghari na oke ihu igwe n'ụzọ pụrụ iche. Na Spain anyị hụrụ ọtụtụ ndị bi na-enweghị nsogbu na ugwu ndị dị elu. Dịka ọmụmaatụ, n'etiti amphibians, anyị na-ahụ Chukwudi Nwachukwu ma ọ bụ vermilion frog. E nwekwara agwọ ụfọdụ, dị ka asp viper, nke site n'ụzọ nwere nsị na-egbu egbu, yabụ maka nchekwa ọ ka mma ịghara imetụ agwọ ọ bụla aka ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ị na-eme.
E nwere anụmanụ na-ekpo ọkụ, dị ka sarrio na ị pụrụ ịhụ na foto dị n'elu. Anumanu a di ebube na-agbanwe uwe ya n'oge oyi ka o nwee ike iguzogide oke ala. Ma n'ezie enwere oke oke, dị ka snow snow, ị hụrụ. Nnụnụ dị ka alpine Weevil ma ọ bụ ptarmigan Ha na-ebi afọ niile n’ugwu ndị dị elu, na-eri ihe ọ bụla ha hụrụ, site na obere ụmụ ahụhụ ruo na mkpụrụ.
Ugwu ugwu dị elu nwere ụfọdụ àgwà na-adọrọ mmasị, ị naghị eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Climatology » Ugwu ugwu dị elu